Mohamed Salah oo shaki geliyey mustaqbalkiisa Kooxda Liverpool, maalmo yar uun kaddib markii uu kula guuleystay Horyaalka Premier League – Gool FM
Mohamed Salah oo shaki geliyey mustaqbalkiisa Kooxda Liverpool, maalmo yar uun kaddib markii uu kula guuleystay Horyaalka Premier League
Haaruun July 25, 2020
(Liverpool) 25 Luulyo 2020. Ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa shaki geliyey mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta Liverpool kaddib markii labo maalin uu ka hor uu kula guuleystay horyaalka Premier League oo ay muddo sugayeen hanashadiisa.
Xiddiga xulka qaranka Masar ee Mohamed Salah waxa uu iska diiday inuu shaaciyo in Mustaqbalkiisu uu yaalo garoonka Anfield oo uu waqti dheer sii joogi doono Kooxda Liverpool, taasoo uu horyaalka Ingiriiska kula guuleystay kaddib 30 sano oo ay sugayeen inay sare u qaadaan.
Waxa uu Salah sidoo kale kula guuleystay kooxda Liverpool, horyaalka Premier League, tartanka xiisaha leh ee Champions League, Koobka Kooxaha Adduunka ee Club Wold Cup iyo UEFA Super Cup, waxaana uu si lama filaan ah uu wiilka reer Masar u qirtay in uusan hubin mustaqbalkiisa iyo halka uu ka ciyaari doono.
Warka ka soo yeeray Mohamed Salah ayaa yimid xilli kooxda Reds ay ku jirto damaashaadka hanashada horyaalka Premier League oo loo gacan geliyey Arbacadii hore.
Kaddib Wareysi uu siiyey LA FM Colombia ayaa waxa wax laga weydiiyey mustaqbalkiisa, waxaanu ku jawaabay Salah: “Cidina ma oga mustaqbalka iyo waxa dhici doona, aan aragno waxa dhici doona, hadda waxaan ku guuleysannay Champions League iyo Premier League, waana faraxsanahay, mustaqbalka waxa dhici doonana waynu arki doonaa, laakiin waqtigan waxaan ku faraxsannahay koobabka aan ku guuleysannay.”
28-sano jirkaan ayaa kal ciyaareedkan dhaliyey 19 gool oo horyaalka Premier League, waxaana uu wadar ahaan u dhaliyey 94 gool kooxda Liverpool 151 kulan oo uu u saftay tan iyo markii uu Naadiga Roma uga soo dhaqaaqay xagaagii 2017-kii.
Inkastoo heshiiskiisa garoonka Anfield uu kaga harsan yahay haatan saddex sanadood oo kale, haddana waxa uu shaki geliyey mustaqbalkiisa Kooxda Liverpool, iyadoo ay jiraan kooxo xiiseynaya saxiixiisa oo ay ka mid tahay Real Madrid.
“Kani waa ciyaaryahankii ugu fiicnaa booskiisa ee aan abid arkay” – Pep Guardiola
RASMI: Xavi Hernández oo xaqiijiyey inuu ku dhacay COVID-19, xilli kooxda uu macallinka u yahay ay caawa ciyaareyso